डोल्पामा ढुवानीको विकल्पमा अझै घोडा-खच्चडको प्रयोग - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
डोल्पामा ढुवानीको विकल्पमा अझै घोडा-खच्चडको प्रयोग
प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०७१, सोमबार
भदौ २३ ।जाजरकोट,देशका अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लालाई यातायात पुगिसकेको अवस्थामा मध्यपश्चिमको हिमाली जिल्ला डोल्पामा भने ढुवानीको विकल्प नहुँदा अझै घोडा-खच्चडको प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
जिल्लामा दुई विमानस्थल भए पनि त्यहाँ नियमित रुपमा उडान हुन नसक्दा तथा भाडादर सर्वसाधारणले थेग्न नसकेको कारण घोरेटाहरुमा अझै खच्चडका लस्करमात्र देखिन्छन् । दैनिक झन्डै ४०० खच्चडले खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्यवस्तु र निर्माण सामग्री ओसार्ने गरेको संबद्ध व्यवसायी बताउँछन् ।
चामल, चिनी, तेल, नुन, ग्यास, दाललगायत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा, पुस्तक र सिमेन्ट, छडलगायत विकास निर्माण सामग्री घोडा–खच्चडबाटै ढुवानी गर्ने गरिएको छ ।
जाजरकोट र रुकुमका विभिन्न बजारबाट दैनिक ३०० खच्चडले डोल्पातर्फ सामान ओसापसार गर्ने गरेको खगेनकोटका पूर्णबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।
गत वर्ष सरकारले एक वर्षभित्र मोटरबाटो पुर्याउने बचनबद्द गरेपनि बजेट भने कम निकासा भयो । जाजरकोट-दुनै सडक निर्माणमा संलग्न सैनिक कार्यदलले अहिलेकै दरमा बजेट उपलब्ध भए अझै दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ । यातायातको साधनका रुपमा हवाई सेवा छ तर नियमित तथा भरपर्दो छैन । खच्चडबाट ढुवानी गर्दा भन्दा निकै महँगो पनि पर्ने जुफालकी त्रिपुराकोटका रामबहादुर न्यौपानेले बताउनुभयो ।
“खच्चडले रु ६० प्रतिकिलोमा ढुवानी गर्ने सामान जहाजले १५० लिन्छ,” उहाँको भनाइ छ । दैनिक घोडा–खच्चडले ढुवानी गर्दा पनि डोल्पामा खाद्यान्न र विकास निर्माण सामग्री अभाव हुने गरेको न्यौपानेको भनाइ छ । खच्चडले चार दिनको बाटो हिँडेर डोल्पा सामान ढुवानी गर्ने गरेका छन् । “ग्यास पनि जाजरकोट खगेनकोटदेखि आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो “यसको मूल्य नै दुनैमा प्रतिसिलिन्डर रु १० हजार पर्छ ।”
जाजरकोटको रिम्ना र रुकुमको चौरजहारीबाट ढुवानी गर्दा प्रतिक्विन्टलको सात हजारसम्म ढुवानी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर सडक यातायातको विस्तारपछि जाजरकोटको मन्माई, चौखाबजार, तल्लुबगर, रुकुमको राडी बजारलगायत स्थानबाट घोडा–खच्चडद्वारा डोल्पातर्फ विभिन्न सामग्री ढुवानी हुने गरेको छ । जाजरकोटको तल्लुबगरसम्म यातायात सञ्चालन हुने गरेको छ । कच्ची सडक, विभिन्न खोलामा पुल नहुँदा यातायात नियमित बन्न नसक्दा डोल्पा लैजाने सामग्री टाढाको दूरीबाटै खच्चडद्वारा ढुवानी हुने गरेको छ । सेनाले जाजरकोट– डोल्पा सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र पारेको छ ।सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेमा अबको दुई वर्षमा डोल्पा सदरमुकाममा सडक पुर्याउन सकिने पहाडीले भनाइ छ । वर्षायाम भएका कारण अहिले अधिकांश जाजरकोट सडकखण्ड बन्द भएका छन् ।
खगेनकोट गाविसमा पर्ने गुना, फिना, मनमई, गन्दक, मैदे, रातो भिर, रग्दा गाविसमा पर्ने रग्दा भिर, बिफेगौंडा र भगवतीमा पर्ने तल्लुलगायत चार किलोमिटर भिर कटान गर्न पाँच वर्ष लागेको थियो । चालु वर्षमा रुकुम खण्डमा भिर काट्ने कार्य जारी भएको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै डोल्पा खण्डअन्तर्गत पर्ने सात किलोमिटरको भिरको कटान तत्काल सुरु गरिने उहाँको भनाइ छ ।
सेनाले सडकको ११६ मध्ये जाजरकोट, रुकुम र डोल्पा भू–भाग गरी ८३ किलोमिटरको निर्माण कार्य पूरा गरेको छ । डोल्पाको खदाङ, लाहाँ गाविस र रुकुमको गोतामकोट क्षेत्रको ३३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ ।
किन गए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी भेट्न ?
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले लखनउमा स्वागत […]
सुनको भाउ तोलामा ४ सयले वृद्धी
काठमाडौं । बुधबार सुनको भाउ तोलामा ४ सयले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला ५७ हजार ४ सय रुपैंयामा किनबेच […]
काठमाडौं । आईसीयूको पूरा नाम इन्टेन्सिभ केयर युनिट अर्थात् सघन उपचार कक्ष हो, यस वार्डमा गम्भीर खालका […]
अमेरिका र भारतले बनाएको कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण गरिँदै, होला त सफल ?
काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोन्पियाले भारत र अमेरिका मिलेर कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकसित […]
भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय, पच्चपन्न झ्याल दरबारको अवलोकनका क्रममा फ्रान्सेली […]
आइएसद्वारा सिरियाको अर्को सहरमा हमला
जेठ १७। बेरुत इस्लामिक स्टेट ९आइएस० ले सिरियाको अर्को सहरमा आक्रमण थालेका छन् । उनीहरुले सो सहर पनि […]